चीन सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली 10000w/15000w eletric स्कूटर 84v इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली 10000w/15000w eletric स्कूटर 84v इलेक्ट्रिक स्कूटर
तौल एक जरूरी विचार हो यदि तपाइँ गुना र तपाइँको स्कूटर बोक्न को लागी आवश्यक छ। एक लामो दायरा संग स्कूटरहरु भारी ब्याट्रीहरु छन्, र धेरै भन्दा माईल को एक दायरा संग १५ किलोमिटर भन्दा माथिको २४ पाउण्ड। भारी स्कूटर एक लामो अवधिको लागि बोक्न गाह्रो छ, सीढी वा लिफ्ट को एक उडान माथि उठाउन र एक कार ट्रंक मा राखिएको छ।
तौल र पोर्टेबिलिटी कम महत्वपूर्ण छन् यदि मनोरन्जन joyriding वा बन्द roading आफ्नो फोकस हो।
१ टुक्रा मूल्य: 3315USD प्रति टुक्रा
10 टुक्रा मूल्य: प्रति टुक्रा 3205 USD
वयस्कहरु को लागी इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक
मूल "स्कूटर" १ 40 ४० को दशक मा बनाइएको थियो जब एक उद्यमी युवा, सम्भवतः एक वयस्क, पक्की पुरानो रोलर स्केट पाels्ग्रा को एक काठ को फल्याक मा केहि मद्दत संग र ह्यान्डल को समर्थन को लागी एक सुन्तला टोकरी जोडियो।
स्कुटरहरु ती प्रारम्भिक दिनहरु देखि महत्वपूर्ण प्रगति गरेका छन्। आज, तपाइँ वयस्कहरु को लागी बनाईएको इलेक्ट्रिक स्कूटर किन्न सक्नुहुन्छ जुन न्यूनतम शक्ति, छोटो दूरी ब्याट्री र पर्याप्त ब्रेक संग एक बजेट मोडेल बाट शक्तिशाली दोहोरो मोटर्स, विस्तारित ब्याट्री जीवन, उच्च अन्त निलम्बन र हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक संग एक चरम प्रदर्शन मोडेल को लागी। । पत्ता लगाउन को लागी जो तपाइँको आवश्यकताहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो छ, पढ्न जारी राख्नुहोस्।
बिजुली स्कूटर मा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
जबकि एक बिजुली स्कूटर को सबै सुविधाहरु यसको प्रदर्शन को लागी योगदान, केहि अरु को लागी तपाइँ को लागी अधिक महत्वपूर्ण हुनेछ, तपाइँको इच्छित उपयोग को आधार मा।
यदि तपाइँ आफ्नो स्कूटर संग यात्रा गर्न को लागी योजना बनाउनुहुन्छ, मार्ग र तपाइँको गन्तव्य मा सुविधाहरु लाई विचार गर्नुहोस्। के तपाइँ माथिल्लो तलामा हिंड्न वा तपाइँको यात्रा को भाग को रूप मा सार्वजनिक यातायात लिन को लागी आवश्यक छ? के तपाइँ एक लिफ्ट मा तपाइँको स्कूटर लिन सक्नुहुन्छ? के तपाइँ तपाइँको स्कुटर घर भित्र तपाइँको कार्यस्थल मा भण्डारण गर्न को लागी अनुमति छ?
वयस्क बिजुली स्कूटर पाless्ग्रा हब मा निर्मित brushless प्रत्यक्ष वर्तमान मोटर्स संग फिट छन्। धेरै इलेक्ट्रिक किक स्कूटर एक एकल मोटर छ, तर अधिक शक्तिशाली मोडेलहरु दोहोरो मोटर्स संग सुसज्जित छन्।
एक 250 वाट मोटर वयस्कहरु को लागी यात्रा को लागी आफ्नो स्कूटर को उपयोग गर्ने योजना को लागी न्यूनतम को रूप मा सिफारिश गरीएको छ। यो सपाट सतहहरु र सामयिक सानो पहाड को लागी पर्याप्त शक्ति प्रदान गर्दछ। Steeper पहाडहरु संग मार्गहरु को लागी, ३५० वा ५०० वाट संग ठूला मोटर्स को शक्ति तपाइँ inclines माथि र सबै भूभागहरु को लागी तपाइँको त्वरण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै जसो ई स्कूटरहरु २० मील प्रतिघण्टा को एक शीर्ष गति छ। जे होस्, धेरै शहरहरुमा स्कूटर वेग १५ मील प्रति घंटा प्रतिबन्धित कानून छ। जबकि अधिकतम गति सामान्यतया यात्रु वा मनोरन्जन सवार को लागी एक चिन्ता छैन, त्वरण अधिक महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। शक्ति को लागी छिटो छिटो प्राप्त गर्न को लागी खोज्न को लागी, एक दोहोरो मोटर कन्फिगरेसन सिफारिश गरीएको छ।
एक स्कूटर को दायरा, वा दूरी यो एक एकल ब्याट्री चार्ज मा यात्रा, मोटर शक्ति, स्कूटर र सवार वजन, मोड, मौसम र औसत गति सहित धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ।
एक दायरा संग एक स्कूटर को लागी हेर्नुहोस् कि तपाइँ जहाँ तपाइँ जानु आवश्यक छ। ध्यान दिनुहोस् कि धेरै स्कूटर निर्माताहरु आदर्श स्थिति मा आधारित आफ्नो स्कूटर को दायरा अनुमान।
स्कूटर खुट्टा, ड्रम, डिस्क र बिजुली वा पुनर्जन्म ब्रेक सहित धेरै ब्रेक प्रकार, संग आउँछ।
डिस्क ब्रेक सबैभन्दा प्रभावकारी र विश्वसनीय छन्। ड्रम ब्रेक अन्य ब्रेक प्रकारहरु भन्दा कम रखरखाव को आवश्यकता छ र भिजेको अवस्थामा राम्रो प्रदर्शन। फुट ब्रेक या त डिस्क वा ड्रम ब्रेक भन्दा कम प्रभावी छन्। इलेक्ट्रोनिक ब्रेकि systems प्रणालीहरु ब्रेक लगाउन को लागी मोटर को उपयोग मा निर्भर गर्दछ। तिनीहरू सबैभन्दा कमजोर छन्, तर सामान्यतया राम्रोसँग काम गर्दछ जब एक खुट्टा ब्रेक संग संयुक्त।
इलेक्ट्रिक स्कूटर या त ठोस (वायुहीन) वा वायवीय टायर संग आउँछ। ठोस टायर कुनै सदमे अवशोषण प्रदान, त्यसैले सवार सडक मा हरेक टक्कर लाग्छ। वायवीय टायर झटका को केहि अवशोषित, तर उनीहरुलाई ठोस टायर भन्दा बढी रखरखाव को आवश्यकता छ।
इलेक्ट्रिक स्कूटर निलम्बन को तीन मुख्य प्रकार संग सुसज्जित छन्: हाइड्रोलिक (एयर पिस्टन), वसन्त र रबर निलम्बन। सबै भन्दा राम्रो निलम्बन प्रणाली कुण्डली मा हाइड्रोलिक वा कुण्डली मा हावा, वसन्त र पिस्टन को एक संयोजन हो। केहि स्कूटरहरु कुनै निलम्बन प्रणाली छैन र ठूला वायवीय टायर मा भरोसा गर्न को लागी bumpy सडक को झटका अवशोषित।
वयस्कहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो बिजुली स्कूटर के हो?
यात्रुहरुको लागि सबै भन्दा राम्रो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर
हामी के मन पराउँछौं: लगभग १०० मील प्रतिघण्टा को एक शीर्ष गति १५००० वाट मोटर संग सुसज्जित अन्य स्कूटरहरु संग तुलनात्मक छ। पोर्टेबिलिटी कम तौल, एक तह स्टेम र handlebars, र एक दूरबीन ह्यान्डल संग मंच बाट बाहिर आउछ कि डोली पाels्ग्रा संग हासिल गरीन्छ। जोडेको स्कूटर टाउ गर्न सजिलो छ, यसको आफ्नै मा स्वतन्त्र खडा हुनेछ र एक अल्ट्रा सानो पदचिह्न छ।
के हामी मनपराउँदैनौं: निलम्बन र सानो रबर पा whe्ग्रा को अभाव एक नराम्रो सवारी को लागी बनाउँछ।
सर्वश्रेष्ठ ब्याट्री दायरा
हाम्रो लिनुहोस्: शक्तिशाली स्कूटर दुई 00५०० वाट रियर व्हील ड्राइभ मोटर्स कि उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान गर्दछ जब पहाडहरु चढाई समेटेको छ।
हामी के मनपर्छ: कुशन टायर एक आरामदायक सवारी मा योगदान। एक 72V, 80A ब्याट्री दस घण्टा को समय चार्ज संग स्कूटर 110 माइल को अनुमानित दायरा, धेरै भन्दा धेरै स्कूटर को दायरा दोब्बर भन्दा धेरै दिन्छ।
हामी के मनपर्छ: यो ठूलो र भारी 140 पाउन्ड मा छ
सबै भन्दा राम्रो कम्प्याक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर
हाम्रो लिनुहोस्: यो 140 किलोग्राम भन्दा बढी तौल भएको के १५ स्कुटर दुई 00५०० वाट मोटर्स संग सज्जित छ कि यसले 90 ० माइल प्रतिघण्टा को शीर्ष गति प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी के मनपराउँछौं: अगाडि चुम्बकीय ब्रेक संग एक अद्वितीय पुनरुत्थान ब्रेकिंग प्रणाली स्कूटर को ब्याट्री चार्ज गर्न मद्दत गर्दछ। पेटेंट वायुहीन टायर कुनै मर्मत को आवश्यकता छ। दायरा एक एकल चार्ज मा १२४ माईल को दूरी मा छ, यो सवारहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो स्कूटरहरु को एक बनाएर जो यो जताततै ले।
हामी के मन पराउँदैनौं: स्कूटर एक निलम्बन संग सुसज्जित छ, सानो ठोस टायर एक उग्र सवारी को लागी बनाउँछ।
सबै भन्दा राम्रो बजेट इलेक्ट्रिक स्कूटर
उत्पादन को नाम k15 15000w 72V ठूलो शक्ति इलेक्ट्रिक स्कूटर
मोडेल नम्बर k15
दायरा प्रति शुल्क 140-150 किमी
अधिकतम गति १५० किमी/घन्टा (सुरक्षा अन्तर्गत १३० किमी/घन्टा भन्दा माथि)
ब्याट्री 72V 80Ah: LG ब्याट्री उच्च क्षमता 18650 लिथियम ब्याट्री (ब्याच द्वारा) 72v 100ah: चीन ब्याट्री
मोटर शक्ति डबल brushless मोटर, 72V 7500W*2， अधिकतम तत्काल उत्पादन 2000W
अधिकतम गति 160KM/घन्टा
स्कूटर सुरक्षा स्कूटरहरु को लागी एक इक्विटी परिप्रेक्ष्य बाट अतिरिक्त अनुसन्धान को लागी कल गर्न सक्ने एक प्रमुख चिन्ता हो। एक अस्टिन, टेक्सास अस्टिन सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (APH) र रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरु द्वारा आयोजित स्कूटर शेयर सुरक्षा मा अध्ययन पहिलो पटक प्रयोगकर्ताहरु लाई विशेष गरी दुर्घटना को सम्भावना रहेको पाईयो। आफ्नो प्रकार को पहिलो, अध्ययन टेलिफोन साक्षात्कार पछि आकस्मिक कोठा भ्रमण को जाँच गरेर स्कूटर शेयर सुरक्षा मा देख्छ। जसरी बाइक सेयरि,, सुरक्षित सडकहरु, हेलमेट को उपयोग, र यातायात कानून को न्यायोचित कार्यान्वयन को जाँच गरीनु पर्छ। सिट स्कूटर र अन्य धेरै स्थिर वाहन ढाँचाहरु पनि अपा stand्गता संग स्ट्यान्ड अप स्कूटर सम्भव छैन बनाउन प्रयोगकर्ताहरु को लागी अधिक सुलभ हुन सक्छ। सीडीसी अध्ययनले यो पनि पत्ता लगायो कि खाडल र सीमित संरक्षित लेन जस्ता पूर्वाधार को कमीले दुर्घटनाहरु को लागी बृद्धि जोखिम मा योगदान पुर्‍यायो, जो कडा उपयोगकर्ता आवश्यकताहरु वा प्रवर्तन द्वारा सम्बोधन गर्न सकिदैन।
केही शहरहरु, जस्तै २०१ 2018 मा सिएटल, सुरक्षा को बारे मा चिन्ता को कारण स्कुटरहरु लाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरीयो। जे होस्, सिएटल २०२० मा अनुमति प्राप्त अपरेटरहरु संग एक स्कूटर पायलट कार्यक्रम शुरू गर्ने योजना बनाइरहेको छ। स्कूटर कम्पनीहरु को लागी ढोका खोल्न को लागी यस इच्छा को केहि सुरक्षा चिन्ताहरु लाई सुझाव दिन को लागी शहरहरु बाट बाहिर आउन सक्ने डेटा को कारण हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, पोर्टल्याण्ड मा, वा, जुलाई १ to देखि नोभेम्बर २०, २०१ from सम्म १ 17 वटा स्कुटर सम्बन्धी आपतकालीन कोठामा गएका थिए, जुन शहरले बताएको छ उही अवधिमा साइकल चोटपटकको संख्या भन्दा कम थियो।
स्कूटर कम्पनीहरु सजग छन् कि स्कूटर सुरक्षा को बारे मा चिन्ता अधिक तैनाती र उपयोग को लागी एक प्रमुख बाधा हो। जुलाई २०१ In मा, लाइमले आफ्नो सार्वजनिक नीति र सुरक्षा सल्लाहकार बोर्ड को सुरुवात गरी शहर-स्तर माइक्रोमोबिलिटी नियमहरु को विकास मा मद्दत पुर्‍यायो। अर्को प्रमुख अपरेटर, बर्ड, भर्चुअल र व्यक्तिगत रूप मा सवार प्रशिक्षण को माध्यम बाट सुरक्षा बढाउन को लागी एक १०० शहर को यात्रा शुरू गर्यो।
धेरै शहरहरु 18 बर्ष भन्दा मा स्कूटर प्रयोगकर्ताहरु को लागी हेलमेट को उपयोग को आवश्यकता छैन, यद्यपि त्यहाँ धेरै शहरहरुमा नि: शुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम छन्।
जसरी धेरै सार्वजनिक एजेन्सीहरु र शहरहरु प्रकोप को समयमा माइक्रोमोबिलिटी सेवाहरु लाई सम्पर्क गरीयो महत्वपूर्ण भूमिका को एक बढ्दो स्वीकृति यस्तो सेवाहरु लाई ठूलो यातायात नेटवर्क भित्र खेल्न सक्छ, र स्कुटर कम्पनीहरु र पारगमन एजेन्सीहरु को बीच मा अधिक सार्वजनिक निजी साझेदारी को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ सुझाव दिन्छ।
कोभिड 19१ crisis संकट भन्दा पहिले नै, धेरै शहरहरु ट्रान्जिट स्टेशनहरु को आसपास गतिशीलता केन्द्रहरु को विकास गरेर बासिन्दाहरु को लागी उपलब्ध गतिशीलता विकल्प को सूट मा ई-स्कूटरहरु लाई शामिल गर्न को लागी कदम चाल्दै थिए। यी केन्द्रहरु, मिनियापोलिस मा शुरू गरीएको जस्तै, MN २०१ of को पतन मा, सार्वजनिक ट्रान्जिट, बाइक स्टेशनहरु र ई स्कूटर पार्किंग, र बाटो खोज संकेत पहुँच सुविधा।
अघिल्लो: सीई संग 7000w मोटर patinete electrico स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर
१३ इन्च स्कूटर ， लामो दूरी इलेक्ट्रिक स्कूटर ， इलेक्ट्रिक स्कूटर दोहोरो मोटर
20000W स्कूटर foldable हल्का स्मार्ट इलेक्ट ...
कारखाना मूल्य नयाँ trotinette electrique तह ...
सस्तो बिजुली मोटरसाइकल 15000w/2000 scootered ...
फैशन बोसो टायर दुई पा wheel्ग्रा बिजुली रथ cov ...
चिनियाँ संस्करण इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टेबल 84v 1 ...